Baarlamaankan 10aad go’aan maka gaari doonaa doorashada dalka? Warbixin:- – Hornafrik Media Network
Muda laba todobaad ah xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa dood adag waxa ay ka liyiheen qaabka ay noqoneyso doorashada dalka ee 2020/21-ka.
Mudanayaasha golaha ayaa ka doodaya sharciga doorashada dalka oo ay soo diyaariyeen guddi uu u saaray gudoonka golaha waxaana gudigaas ay cadiyeen in dalka aaney ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo madaxweynaha ay soo dooranayaan shacabka Soomaaliyeed, taas badelkeedana waxay ku taliyeen in madaxweynaha ay doortaan labada gole ee baarlamaanka fadaraalka Soomaaliya
Soo jeedinta guddiga waxaa ka horyimid qaar ka mida xildhibaanada waxayna qabaan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, taas oo ah aragtida laanta Fulinta oo uu ugu horeyo Madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhowr jeer ku celceliyey in dalka ay ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah si dadka tala loogu celiyo, balse xildhibaan khadiijo Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa si cad golaha uga hor shegtay todobaadkii hore in dalka aaney ka dhici karin doorasho dadweyne.
Dad badan ayaa xasuusta in baarlamankii 9aad ay in mudo ah ka doodayeen sharciga doorashoyinka dalka, sanadkii 2015-kii markii ay natiija ka soo bixi weydayna waxaa la weray sharcigii xilligaas madaxda dowladda fadaraalka iyo maamul gobaleedyada baarlamankan hada jira go’aan ma ka gaari donaan doorashada dalka? Waa su’aasha dul hoganaysa dadka Soomaaliyeed.
Waqtiga baarlamaanka hada jira waxaa ka haray muda 8bil ah walina ma cada qaabka doorashada dowlada madaxweyne Farmaajo guud ahaana waxaa u hartay muda sanad ah dad badan ayaana ka walwal qaba in aan wali laheyn nuuca doorashada dalka ka dhici doonta marka la gaaro sanadka 2020/2021-ka.
Dani oo 20-cisho kadib dib ugu soo laabtay Garowe